AudioMob: Ridza MuGore Rekutengesa Idzva Iine Audio Ads | Martech Zone
AudioMob: Ridza MuGore Idzva Rekutengesa Nemavhidhiyo Ads
Chitatu, December 30, 2020 Chipiri, Zvita 29, 2020 Christian Facey
Audio kushambadza inopa inoshanda, yakanangwa zvakanangwa, uye mhando yakachengeteka nzira yemakemikari kutema kuburikidza neruzha uye kusimudzira kwavo kutengesa muNew Year. Kumuka kwekushambadzira kwekuteerera kwanga kuri kutsva muindasitiri kunze kweredhiyo asi iri kutogadzira buzz hombe. Pakati pemheremhere, kushambadzira kwekuteerera mumitambo mbozhanhare vari kuveza yavo yega chikuva; kukanganisa indasitiri uye kukura nekukurumidza, zvigadzirwa zviri kuona yakakwira caliber yekushambadzira kuiswa mumitambo mbozhanhare. Uye vanhu vari kuwedzera kutendeukira kumitambo mbozhanhare, vachitsvaga nzira nyowani dzekuzadza kufinhwa.
Shungu Audio ndiye piyona weiyo fomati nyowani: Google ye Startups yakatsigirwa premier yeaseti kushambadzira mumitambo mbozhanhare. Mhando yavo yekushambadzira yakachengeteka zvachose uye inonyudza, iine mukana wekuti mabrands ave neushingi uye nekugadzira mukusvika kune vakawanda vateereri.
Nzvimbo yekushambadzira iri kubatikana kupfuura nakare kose nguva yegore, uye nezvitoro zvakawanda zvepanyama zvakavharwa nekuda kwekukiya iyo online nhandare ichave inokwikwidza kupfuura nakare kose. Naizvozvo, zvigadzirwa zvinofanirwa kuve zvakangwara neshambadziro yavo kushandisa gore rino kuti vawane mukana uye vabudirire mhedzisiro yavanoda; odhiyo kushambadza inopa yakanakira mota yekuita izvi chete.
Vatengi Vanoda Zvirinani Zviitiko zveAd
2020 rave riri gore risina rimwe, uye nenguva yakawanda yakashandiswa pamba, kushambadza kwechinyakare kwakanyanyisa nzvimbo yemidhiya. Lockdown yakadzora monotony kupinda pasi, iine basa kubva kumba, idya kubva kumba uye kutamba kubva kumba izvozvi zvinoonekwa seyakajairika.
Zvekutenga zveGore Idzva gore rino zvinotaridzika zvakasiyana: mitsara kunze kwemukova uye kukwikwidza kwekutengesa kwekupedzisira zvese zvichave zviripo. Kune zvitoro zvakawanda zvakavharwa kuruzhinji, kutengesa kuri kutorwa online, uye vatengesi vangangwarire mwaka unonaya. Iine avhareji yeKisimusi shandisa 2020 inotarisirwa kudonha 7% kana ichienzaniswa negore rapfuura, nehombe £ 1.5billion, mishandirapamwe yekushambadzira inoda kutarisa kukwikwidza yavo mutambo kuchengetedza mutengi kushandisa mari yakakwira.
Kuvaraidza ishoko rehupenyu hwekukiya pasi, neTV, firimu, podcast uye nharembozha zvese zvinoenda neimwe nzira yekuvhara musiyano uripo pakati pehukama hwehukama nehukama chaihwo. Iyo nyaya yezvigadzirwa ndeyekunyanyisa kubudikidza neakasiyana mafomati: vatengi vanosara vachishuvira chimwe chinhu chakasiyana apo maziso avo achipenya pamusoro pechimwe chinoonekwa chinodzokorora kushambadza. Iri Gore Idzva inguva yakakodzera yezvigadzirwa kuti vaise nzeve yavo pasi, uye vatore pamitambo mitsva yekuenda kumberi kwevakwikwidzi.
Chinhu chisina kubatika chevashambadziri, nharembozha yega yakaburitsa 48% yemari yese yemitambo pasi rese gore rino, iine hombe $ 77 bhiriyoni. Nharembozha mitambo yakadzika midzi mukuvarairwa kwekuvharira, uye kwete chete kune vechidiki vechidiki. Iyo mitambo yemitambo yakashanduka pamusoro pemakore, uye yavo musika wekutarisira unongoerekana wakafara zvakanyanya.
Nhasi, makumi matatu neshanu% evatambi venhabvu vakadzi vane makore akaenzana echikadzi mutambi, ane makore makumi matatu nematanhatu.
MediaKix, Mukadzi Gamer Statistics
Nharembozha mitambo inopa mukana wakakura wekuti brand isvike nekutarisa kwakajeka pane yakatarwa huwandu hwevanhu. Ipuratifomu inogona kuburitsa vateereri vasina kubatwa uye kubatanidza marangi kune vatengi zvakananga. Mumashoko akareruka, mitambo mbozhanhare inogona kubatanidza hodhi nevateereri vanopfuura mabhiriyoni maviri nemazana mashanu emitambo yepasirese: iyo hombe mukana webhizimusi inosvika muindasitiri yese yevaraidzo. Kuti vatore mukana weyakajairika yekutengesa kweGore Idzva, mabrand anofanirwa kuteerera kune zvinodiwa nevatengi vavo, uye musika: zvingave zvisina-pfungwa kuti vatendeudzire kutarisa kwavo kumitambo yemafoni senge hombe mukana wemari.
Audio - Iyo Nyowani Frontier
Audio kushambadza haichisiri iyo inorambidzwa radio kutepfenyura megaphone kubva makumi emakore apfuura. Dzinogona kuve dzakanaka, dzakatsetseka, uye kugadzira chiitiko chinoratidzira chaiko kusangana kwevanhu.
Nezwi-rakabatsirwa vakurukuri vakangwara vanogadzikana zvachose mudzimba dzakawanda muUS, dhijitari odhiyo odhiyo yakanyanya kuwanda. Ivo zvakare vanogamuchirwa zviri nani:
Iine 58% yevatengi vanowana vakangwara mutauri odhiyo kushambadza kushoma kupfuura mamwe mafomu, nepo 52% vakati ivo vari zvakare kuita zvakanyanya!
Iko kudhura-kushanda kweyekushambadzira kushambadzira kwechipiri kune pasina, ne 53% yevatengi waita kutenga zvichienderana neshambadziro yekuteerera.
Mumitambo yemafoni, odhiyo kushambadzira kunogona kutorwa nhanho yekuwedzera kunzwa seicho chaicho: vanogona kunyudzwa zvakakwana muhurongwa hwekugadzira, vachipa mabhenji chitsva uye chine simba kutora nekutengesa kwavo.
Zvinotokwanisika kuvaka mutambo wakakomberedza chakasanganiswa chose chose odhiyo yekushambadzira, uchiwedzera kune chiitiko chese cheiyo gamer: senge yakavakirwa-redhiyo mune ichangoburwa Big Brother: Iyo Mutambo, iyo yakashandisa fomati yeAdMMM yekushambadzira kupa maaudio ads mukati. mutambo.
Kubudirira kweDSP yakabudirira kwaisa Shungu Audio panhepfenyuro yekushambadzira odhiyo mumitambo, ichive fomati ichiwedzera kufarirwa nevagadziri. Iko kuzvimba kwechisimba kwekufamba kuenda kune isiri-yekuvhiringidza mu-mutambo kushambadzira, inotyaira odhiyo pamberi nepakati.
Audio kushambadza inogonesa vatambi kuti varambe vachitamba vachifumurwa kushambadziro; havana kutsauswa zvakakwana kuti vasiye mutambo asi vachiri kusangana nechiratidzo. Kune vatengi, ndiko kukunda sezvo ivo vachigona kuenderera mutambo wemitambo; yemakemikari, ivo vachiri kuwedzera kukura uye kuwedzera kutaridzirwa kuratidzwa; uye vagadziri vanogona kuve nechokwadi chekusavhiringidzika uye kunyudza ruzivo rwevashandisi.
Iko kukunda kuhwina kuhwina uye mukana wekumira kubva muboka revanhu panguva apo mabrand akawanda ari kurwira nzvimbo yepakati.
Teerera Kumusoro Brands!
Audio kushambadzira iri munzira yekukwira, ine fungidziro ye84% yemari yekukura kubva 2019 kusvika 2025, uye AudioMob iri kupa yakachena uye yakanakisa mhinduro yemakemikari kuti apinde mumusika. Nezvitoro zvakawanda zvepanyama zvakavharwa uye mushandirapamwe weGore Idzva unova unogadzira, iyo nhandare yemakambani yakazara nekudiwa kwekukwira pamusoro pemakwikwi.
Shungu Audio straddles maviri akakura mikana yezvigadzirwa yekucheka kuburikidza neruzha rweindasitiri: nharembozha inzvimbo yakasarudzika yekusimudza yekushambadzira nevateereri vakawanda vanosvika ukuwo odhiyo kushambadzira ichirovera inonyudza uye isiri-inokanganisa ruzivo kune mutambi.
Kushambadzira odhiyo kunogona kusimudzira kutsvagirwa kweGore Idzva mamaira pamusoro pevamwe vese muna 2020, uye AudioMob iri kutyaira iyo indasitiri kuti igadzire zvirinani, zvinonakidza, uye zvinonyudza kushambadza kwezwi.
Shanyira AudioMob Kuti Uwane Ruzivo
Tags: odhiyo kushambadzaodhiyo kushambadzaodhiyo dspteveradspkushambadzira kwemutambomitambovhidhiyo yemitambo kushambadzira
Ini ndakavamba AudioMob nekuti ini ndinonzwisisa kushungurudzika kwevatambi vanonzwa kana kutamba kwavo kukanganiswa nekushambadzira kushambadzira. Kuunza pamwe humwe hwakanakisa huropi muindasitiri, AudioMob mhinduro inopa nzira yevanosimudzira mutambo wevanoshambadzira kuti vaite mari mitambo yavo kuburikidza neyekushambadzira odhiyo ivo vachichengeta vatambi vavo vachiita.
Maitiro Ekuita Izvo Zvakakwana SEO Ongororo
Deepfake Technology Inogadzira Sei Kushambadzira?